Nuucayada Xasuusta iyo Cuntooyinka Xoojiya Xusuusta |
Khaalid Cabdirisaaq Caskar, July 15, 2018
Abshiro Axmed Cabdi — April 15, 2019
Xasuusta waxaan u kala saaraynaa seddax nooc oo kala ah Xasuus dareen, Xasuus gaaban iyo Xasuus xasuus dheer.
1. Xusuusta dareenka:
Waa xasuus aan ku hayno wax yaalaha dareennada sida: maqalka, aragga, dhadhanka, urka, taabashada, sido kale xasuusta dareenka ah ayaa haya so macluumaadka muddo aan ka badnayn shan ilbiriqsi.
Tusaale: marka uu qof arko qof waddada marayo oo uusan diirada saarin qofkaas muuqaalkiis, aragtidaas ayaa waxaa lagu kaydiyaa xasuusta dareenka ah. Waan sabbabta keentay in uu qofku tilmaami waayo dhamman waxuu waddada ku soo arkay.
2 -Xusuusta gaaban
Xusuusta muddo gaaban waa xasuus laxariirta qofka nolal maalmeedkiis, waan xasuus lagu kaydiyo xogaha kasoo gudba xasuusta dareenka ah, kaddibna xogtaas waxaa loo diraa xusuusta waqti dheer ah. haddii macluumaadka aan loo gudbin xasuusta wakhti dheer 15 daqiiqo guddaheed macluumaadkas waxaa loo baddinaa in la hilmaamo.
Tusaale: hadii ardaygu suusan si wannaagsan u akhrin casharka uu maalintaas soo qaatay wuu hilmaamayaa. sabbabtoo ah waxaa lagu hayay xasuusta muddo gaban lakiin haduu ardaygu si wannaagsan u akhrin lahaa waxaa loogudbin lahaa xasuusta wakhti dheer.
3 -Xusuusta waqtiga dheer
Waa xasuus lagu kaydiyo wax yaalaha qofka waayo- aragnimaddiis ah iyo waxii ku soo noqnoqdo qofka noolashiish, sida magacyada saaxiibadiis, eheladiis iyo magaca meeshaa uu wax kabarato sida iskuulka,dugsiga ama jamacad. Inta baddana macluumadka lagu keediyo xuusta wakhti dheer ayaa ah macluumaad ka soo laga gudbiyay xasuusta wakhti gaban.
Qorista macluumaadka: Adiga oo qoraya taariikhada iyo shaqada aad rabto inaad qabbato. Adiga oo isticmaalayo wax ka badan hal macne si aad ugu rakibtid macluumaadka maskaxdaada(siday ula qabsto maxkaxdaada).
Cuntada: Cunto khafiif ah ayaa qofka maskaxdiis ka dhigto mid si wannagsan u shaqeyso. mid ka mid ah cuntooyinka wanaagsan ee lagu xoojiyo xasuusta waa cuntooyinka ay ku jirto kiimikada dufanka omega-3, waxaana laga helaa malayga salmon,looska, iyo ukunta.
Hurdo: hurdadu waxaa laga helaa caafimaad iyo raaxo, qaar ka mid ah dadka waxbaaro ayaa soo jeedinayeen in hurdada ay tahay mid ka mid ah baahida maskaxda lagama maarmaanka u ah, sidaas daraaddeed ayuu u baahan yahay qofka in muddo 8 saacaddood ah in uu hurdo.
Cuntada xoojisa xusuusta
1) Kalluun salmon(kalluun shiilan)
2) Farmaajo (cheese).
3) Cuntooyinka yaryar sida khudarta.
Tags: Nuucayada Xasuusta
Next post Dariiqooyinka Xasuusta
Previous post Qofku Sidee Ayuu Ku Noqon Karaa Qof La Jecel Yahay oo La Ixtiraamo ama La Tixgeliyo?